पिएसविडी परीक्षा भनेको के हो ?
Mon, Dec 09, 2019 | 17:32:57 NST
12:58 PM (4 years ago)
प्रेम पुन, सुर्खेत
प्रश्न : युएईमा सुरक्षा गार्डको लागि जान पिएसविडी पास गर्नुपर्छ भनिन्छ । यो भनेको के हो ? र यसको प्रकृया के हुन्छ ?
उत्तर : कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ – पिएसविडी युएई सरकारले लिने परीक्षा हो । यसमा अंग्रेजी र सुरक्षा गार्ड सम्बन्धी प्रश्नहरु सोधिन्छन । युएईमा सुरक्षा गार्डको काम गर्न पिएसविडी परीक्षा पास गर्न जरुरी छ । यसमा ४ विकल्प सहितका १०० वटा प्रश्न सोधिन्छन । पास हुन कम्तिमा ६० प्रतिशत ल्याउनु पर्छ । यो परीक्षा पास गर्न दुई पटक सम्म मौका पाइन्छ ।